Wararka - Saamaynta Wanaagsan ee Tamarta Qoraxdu ku leedahay Deegaanka
Saameynta Wanaagsan ee Tamarta Cadceedda ay ku leedahay deegaanka
U wareejinta tamarta qoraxda baaxad weyn waxay yeelan doontaa saameyn qoto dheer oo wanaagsan oo xagga deegaanka ah. Badanaa, erayga deegaan waxaa loo adeegsadaa in loola jeedo deegaankeenna dabiiciga ah. Si kastaba ha noqotee, ka bulsho ahaan ahaan, deegaankeennu wuxuu kaloo ka kooban yahay magaalooyin iyo magaalooyin iyo bulshooyinka dadka ku nool. Tayada deegaanka waxaa ka mid ah dhamaan waxyaalahan. Ku rakibida xitaa hal nidaam tamarta qorraxda waxay horumar la qiyaasi karo ka sameyn kartaa dhinac kasta oo ka mid ah bii'adeena.
Faa'iidooyinka Deegaanka Caafimaadka
Falanqeyn 2007 ah oo ay sameysay sheybaarka tamarta cusbooneysiinta qaranka (NREL) ayaa lagu soo gabagabeeyay in la qaato tamarta cadceeda baaxad weyn ay si weyn u yareyn doonto qiiqa oksaydhyada oksaydhka ah iyo baaruud dioxide. Waxay ku qiyaaseen in Mareykanku sidoo kale ka hortagi karo qiiqa 100,995,293 ee qiiqa CO2 si fudud iyadoo lagu bedelayo gaaska dabiiciga iyo dhuxusha 100 GW oo tamarta qoraxda ah.
Marka la soo koobo, NREL waxay ogaatay in isticmaalka tamarta qorraxda ay sababi doonto kiisas yar oo cudurro la xiriira wasakheynta, iyo sidoo kale yareynta kiisaska dhibaatooyinka neef-mareenka iyo wadnaha. Dheeraad ah, yareynta jirrada waxay u tarjumaysaa in yar oo maalmaha shaqada lumiya iyo kharashyada daryeelka caafimaadka oo yaraada.
Faa'iidooyinka Deegaanka Dhaqaale
Sida laga soo xigtay Maamulka Macluumaadka Tamarta ee Mareykanka, sanadkii 2016, celceliska guriga Mareykanka wuxuu cunay 10,766 kilowatt saacadood (kWh) oo koronto sanadkii ah. Qiimaha tamarta sidoo kale way ku kala duwan yihiin, gobol ahaan, iyadoo New England ay bixiso qiimaha ugu sareeya gaaska dabiiciga ah iyo korontada sidoo kale leh boqolkiiba kororka ugu sareeya.
Celceliska qiimaha biyuhu sidoo kale si joogto ah ayuu u kordhayaa. Maaddaama kululaynta adduunku ay yaraynayso sahayda biyaha, sicirkaasi wuu kordhayaa xitaa wuu sii kordhayaa. Korontada cadceedda waxay isticmaashaa biyo dhan 89% marka loo eego korontada ku shaqeysa dhuxusha, taas oo ka caawin doonta qiimaha biyaha inay ahaadaan kuwo xasiloon.
Faa'iidooyinka deegaanka dabiiciga ah
Tamarta cadceedu waxay keentaa ilaa 97% roob ka yar aashitada dhuxusha iyo saliida, iyo ilaa 98% yareynta eutrophication-ka badda, taasoo baabiinaysa biyaha oksijiinta. Korantada cadceedda sidoo kale waxay isticmaashaa 80% dhul ka yar. Sida laga soo xigtay Midowga Saynisyahanada Walaacsan, saameynta deegaanka ee tamarta qoraxda waa mid aad u yar marka loo eego tan tamarta shidaalka.
Baarayaasha Lawrence Berkeley Lab waxay sameeyeen daraasad sanadihii 2007 ilaa 2015. Waxay ku soo gabagabeeyeen in sideedaas sano gudahood, tamarta qorraxda ay soo saartay $ 2.5 bilyan oo keydka cimilada ah, $ 2.5 bilyan oo kale oo keydinta wasakheynta hawada ah, ayna ka hortagtay 300 oo dhicis ah.
Faa'iidooyinka deegaanka bulshada
Gobol kasta ha ahaadee, midka joogtada ah ayaa ah in, ka duwan yahay warshadaha shidaalka foosha, Saameynta wanaagsan ee Tamarta Cadceedda waxaa si siman loogu qaybiyaa dadka heer kasta oo dhaqan-dhaqaale. Aadamaha oo dhami waxay u baahan yihiin hawo nadiif ah iyo biyo nadiif ah oo la cabbo si ay nolol dheer oo caafimaad leh ugu noolaadaan. Tamarta qoraxda, tayada nolosha qof walbaa waa loo hagaajiyay, hadey noloshu ku nooshahay aqal sare ama guri guurguura oo dhex dhexaad ah.
Iftiinka Wadada Cadceeda, Nalalka Bannaanka ee Qoraxda, Iftiinka Daadka Qoraxda, Solar rogayaasha, Iftiinka Beerta Qoraxda, Off Inverter Roobka,